रोचक Archives - Halkara News
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट गम्भीर रुपमा बिरामी भएको पुरुषको प्रजनन क्षमता घट्नसक्ने एक अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ। इजरायलका डाक्टरहरुले कोरोना संक्रमित बिरामीहरुमा गरेको अध्ययनबाट यस्तो तथ्य पत्ता लागेको जनाएका छन्। इजरायलस्थित शेबा मेडिकल केन्द्रका डाक्टर डेन एडेरको नेतृत्वमा कोरोना संक्रमित पुरुषहरुमा...
बेलायतमा महात्मा गान्धीको सुनको जलप लगाइएको चश्मा लिलामीमा २.६ लाख पाउन्ड (चार करोड सात लाख रुपैयाँ) मा बिक्री भएको छ। शुक्रबार ईस्ट ब्रिस्टल अक्सन हाउसले इन्स्टाग्राममा चार हप्ताअघि आफ्नो लेटरबक्समा उक्त चश्मा भेटेको जानकारी दिएको छ। अक्सन हाउसले भनेको छ, ‘यसलाई कोही व्यक्तिले राखेर गएका थिए। चश्मा राखेर जाने व्यक्...
भारत । पश्चिम बंगालको कोलकोतामा एक व्यक्तिले आफ्नी श्रीमतीसँग अवैध सम्बन्ध राख्ने १४ व्यक्तिहरुलाई एक सय करोड रुपैयाँ तिर्न दुई साताको समय दिएका छन्। भारतीय सञ्चारमाध्यामका अनुसार नोटिस पठाउने व्यक्ति व्यवसायी हुन् र उनले आफ्नो मानहानी गरेको भन्दै श्रीमतीसँग अवैध शारीरिक सम्बन्ध राख्ने १४ व्यक्तिहरुलाई एक सय करोड भा...
बोत्तलमा पेट्रोल नदिएपछि पम्प मालिकको क्याबिनमा छोडिदिए विषालु कोब्रा र धामन सर्प
आफूले चाहेको वा सोचेको काममा कसैले अवरोध ग¥यो वा मागेको चीज दिएन भने कतिसम्म आक्रोशित हुन्छ भन्ने एउटै उदाहरण यहाँ काफी छ। हालै त्यस्तै घटना भएको छ। एक जना व्यक्ति बोत्तल लिएर पेट्रोल लिन पेट्रोल पम्पमा गए। तर त्यहाँका कर्मचारीले उनलाई बोत्तलमा पेट्रोल दिएनन्। अनि उनको रीसको पारो तातियो र कस्तोसम्म उपद्रो गरे भने...
संसारकै खतरनाक विष– जसले पत्ता लगायो, उनकै छोरी भइन् पहिलो शिकार
विभिन्न विषहरुमा सबैभन्दा खतरनाक विषको रुपमा साइनाइटलाई लिइन्छ। तर संसारमा साइनाइड भन्दा पनि कैयन् गुणा घातक विष छ भन्ने सायद धेरैलाई थाहा छैन होला। आज हामी त्यहीँ खतरनाक विषका बारेमा केही जानकारी दिने प्रयास गर्दैछौं। पोलोनियम २१० लाई संसारकै सबैभन्दा घातक विष मानिन्छ। यो विष यति कडा हुन्छ कि मात्र एक ग्राम विषले ह...
मानिसलाई घरभित्रै बसाल्न गाउँमा “भूत” खटाइयो
इन्डोनेशियाको एउटा गाउँमा कोरोनाभाइरस नियन्त्रणका लागि मानिसहरू घरभित्रै बसून् र बाहिर निस्किनुपर्दा एक अर्काबीच दूरी कायम राखून् भन्ने उद्देश्यले भूतको भेषमा स्वयंसेवकहरू परिचालित भएका छन्। गत महिनादेखि जाभा द्वीपको केपु गाउँमा ती स्वयंसेवकहरू गस्ती गर्न राति सडकमा निस्किन थालेका हुन्। इन्डोनेशियाको लोककथामा मृत...
छोराभन्दा ६ वर्ष कान्छो तन्नेरीसँगको अफेयरमा फुटबलर नेयमारकी आमा, नेयमार के भने यस्तो?
काठमाडौं । आफूभन्दा ६ वर्ष कान्छो युवासँग आफैलाई जन्म दिने आमाको माया पिरती चलेपछि छोराको के हालत होला? फुटबलको क्षेत्रमा चर्चित हस्तीको रुपमा चिनिएका ब्राजिलियन फरवार्ड नेयमारको हालत अहिले त्यस्तै भएको छ। ५२ वर्षीया नेयमारकी आमा अहिले २२ वर्षीय युवकसँग अफेयरमा छिन्। उनी आफैले इन्स्टाग्राममा फोटो पोष्ट गरेर उक्त कुर...
चीनको वुहान सहरबाट पूरा दुनियाँमा फैलिएको कोरोना भाइरसले महामारीको रूप लिएको छ। यो भाइरसले ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको छ। लाखौं संक्रमित भएका छन्। कोरोना फैलनबाट रोक्न धेरै देशमा लकडाउन गरिएको छ। सबै देश यो संक्रमणबाट बाँच्ने भ्याक्सिनको खोजीमा जुटेका छन् तर अहिलेसम्म कसैलाई सफलता प्राप्त भएको छैन। यसैबीच ए...
लकडाउन, सिमाना र उमेरले रोक्न नसकेको एउटा प्रेम
कोरोना भाइरस र लकडाउनले विश्वभरका करोडौँ मानिसलाई घरभित्र कैद गरिदिएको छ। तैपनि, धन्न इन्टरनेट छ। र, मानिसहरू भर्चुअल माध्यमबाट भए पनि एक–आपसमा कुराकानी गर्न पाएका छन्। कोरोना भाइरस र त्यसको विस्तार हुन नदिन विश्वका अधिकांश मुलुकले लकडाउन गरेका वेला युरोपेली मुलुकहरू जर्मनी र डेनमार्कको वृद्ध जोडीको उत्कृष्ट प्रेमको कथ...